/blog/Ibutamoren , MK-677/Faa'iidooyinka isticmaalka MK-677 (Ibutamoren) budada loogu talagalay jirka dhismaha
Posted on 04 / 21 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Ibutamoren, MK-677.
1. Waa maxay budada MK-677 (budada Ibutamoren)?
2. Waa maxay budada MK-677 / budada Ibutamoren
3. Sidee MK-677 (Ibutamoren) budada u shaqeyso
4. Saamaynta budada MK-677 (Ibutamoren).
5. MK-677 (Ibutamoren) qiyaasta budada
6. Faa'iidooyinka MK-677 (Ibutamoren) budada?
7. MK-677 (Ibutamoren) budada loogu talagalay Istaajin
8. MK-677 (Ibutamoren) waxyeelada budada ah
9. MK-677(Ibutamoren) dulmarka budada:
10. Faa'iidooyinka iibsashada MK-677 budada / budada Ibutamoren laga bilaabo
MK-677 (Ibutamoren) video budada
I.MK-677(Ibutamoren) budada Calaamadaha aasaasiga ah:
Name: MK-677 (Ibutamoren) budada
Formula kelli: C27H36N4O5S
Miisaankani waa: 624.776
Dhibcaha Biyaha: 161 ilaa 315ºC
Waa maxay budada MK-677 (budada Ibutamoren)?
Ibutamoren budada mesylate (MK-677 budada, CAS 159752-10-0) waa daroogo u shaqeeya sida quwad koronto oo hormarsan, hormarinaysa hormoonada hormoonada hormoonka ah, oo la mamnuucayo ficil-galinta GH-ka ee hormoonka hormoonka ah ee ghrelin. Waxaa la muujiyay in la kordhiyo sii-deynta, waxayna soo saartaa kororka joogtada ah ee heerarka plasma ee dhowr hormoonno oo ay ku jiraan hormoonada koritaanka iyo IGF-1, laakiin aan saameynin heerarka cortisol. Waqtigan xaadirka ah wuxuu ku jiraa horumarka daaweynta suurtagalka ah ee hoos u dhaca heerarka hormoonnada, sida koritaanka hormoonka koritaanka hormoonada ama waayeelka waayeelka, iyo barashada bini-aadamka ayaa muujisay inay kordhinayso cufnaanta muruqyada iyo lafaha macdanta labadaba, taasoo ka dhigaysa daaweyn balanqaad ah daaweynta xanaaqa waayeelka. Waxa kale oo ay beddeshaa dheef-shiid kiimikaad jidhka ah sidaa daraadeed waxaa laga yaabaa in ay codsi ku yeeshaan daaweynta buurnaanta.
Budada Ibutamoren waxaa si joogta ah looga wada hadlaa bogaga internetka ee anabolic dhisidda murqaha guryaha. Waxaa laga heli karaa miiska waxaana loo isticmaalaa kuwa doonaya in ay kordhiyaan heerarka hoormoonka koritaanka.
Waa maxay budada MK-677 / budada Ibutamoren?
Sida walxaha cayriin ee budada MK-677 (budada Ibutamoren), budada MK-677 (budada Ibutamoren) budada waa nooc ka mid ah budada crystalline White, faahfaahinta sida:
( 1 2 3 4 ) ↗
Magaca: budada MK-677 / budada Ibutamoren
Qaaciddada Molecular: C27H36N4O5S
Miisaanka Molecular: 624.776
Melting Point: 161 illaa 315ºC
Kaydinta Nambarka: 2-8 ° C
Sida budada MK-677 (Ibutamoren) u shaqeyso
Sida inta badan SARM-yada kale ee CAS 159752-10-0, MK 677 (Ibutamoren) ayaa shaqaynaya iyada oo lagu beegsanayo xarumaha xayawaanka ee gaarka ah iyo isbeddelida habka ay u shaqeeyaan jirka.
Natiijada, taasi waxay u kicineysaa hab ay ku xakameyn karto saameynta anabolic ee steroids iyo hormoonnada. MK 677 (Nutrobal) waa mid la mid ah peptides sida Ipamorelin iyo GHRP-6, laakiin ma dareemi doontid mid ka mid ah waxyeelada caadiga ah.
Tani waa sababta SARMS sida budada MK 677 loo tixgeliyo inay yihiin bedelaadaha cayaaraha adduunka ee jirdhiska iyo sayniska daawada.
Waxaa intaa dheer, halkan waxaa ah saameynta wanaagsan ee MK 677 (Nutrobal) marka la eego hagaajinta hormoonka koritaanka xoojinta garaaca wadnaha:
Waxay xakameysaa calaamadaha somatostatin reseptors
Waxay hoos u dhigtaa waxqabadka salastostatin ee nidaamka
Waxay hagaajisaa somatotroph signaling in hormoonka koritaanka hormoonnada hormoonka (GHRH)
Awoodsiinta iyo kordhinta wax soo saarka guud iyo sii deynta GHRH
Saamaynta budada MK-677 (Ibutamoren).
Daawooyinka Yaraanta ee Horumarka Kobaca; Caruur badan ayaa ku dhacda maqnaanshaha hormoonka koritaanka, taas oo saameyn ku yeelata horumarkooda. Budada MK-677 waxaa loo yaqaanaa inay gacan ka geystaan ​​kor u qaadida heerka hoormoonka jirkooda, sidaas darteed hubi in ay ku horumarin karaan isla heerka in jidhkoodu caadi ahaan doono. faa'iidooyinka MK-677 (Ibutamoren) budada sida:
Cudurka anabolism: Ujeedada ugu muhiimsan ee budada MK-677 waa in la dhiso xajmiga murqaha, jirka jirka aka. IGF-1 oo ay soo saartay sheyga ayaa inta badan mas'uul ka ah nidaamkan, sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa dufanka waxana uu kordhiyaa murqaha xoogga.
Isugeynta Musqulaha: Mastaradda MK-677 waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee loogu talagalay dadka waayeelka ah, maxaa yeelay waxay caawisaa xoojinta muruqyadooda waxayna joojiyaan inay iska joojiyaan. Tani, marka hore, dadka waxay ka dhigeysaa mid xoog badan waxayna u badan tahay inay dhacdo. Shakhsiyaadka da 'yarta ah ee ka soo jeeda cunnooyin caafimaad leh, sheyga ayaa joojiya luminta borootiga iyo murqaha.
Waxay kordhinaysaa muddada dheer iyo dagaalyahannada: Marka hormoonka koritaanka kor u kaco jirka oo leh budada MK-677, waxay saameyn ku leedahay muddada dheer waxayna yaraynaysaa habka gabowga.
Waxay kordhisaa Cufnaanta Lafaha: Budada MK-677 waxay xaqiijineysaa in cufnaanta lafaha qof kasta oo qaadanayaa ay kordho iyada oo ay ugu wacan tahay sii deynta hoormoonka koritaanka. Si kastaba ha noqotee, hal shay oo ay tahay inaad xasuusato ayaa ah inay jiraan fursado sare oo ah in lafahaaga cufnaanta ay marka hore hoos u dhigi doonto waqti xaddidan ka dibna ay bilaabanayso inay kacdo. Waxaad u baahan doontaa dulqaad maadaama ay ku qaadaneyso ugu yaraan hal sano cufnaantaada lafaha inay kordho.
Waxay hagaajisaa hurdada: Daraasaduhu waxay muujiyeen in budada MK-677 ay ka caawiso hagaajinta tayada hurdada ee qofka. Muddadu waxay sidoo kale ka fiicnaan doontaa hurdada REM.
( 5 6 7 ) ↗
Isku day in aad Nootropic: Waxaa loo maleynayaa in budada MK-677 ay hagaajineyso xasuusta qofka iyo kartida barashada. Maaddaama ay sidoo kale ka caawineyso qaababka hurdada, waxay xoojinaysaa shaqada garashada jirka.
MK-677 (Ibutamoren) qiyaasta budada
Sida oo kale SARMs kale, nolosha kala bar nutrobe waa saacado xoogan oo 24 ah, sidaas darteed hal mar maalintii qiyaasta waa wax kasta oo loo baahan yahay. Foomamka dareeraha ee kiimikada ayaa laga qaadayaa afka - si fudud u geli afkaaga iyo liqitaanka; ka dibna ku deji juuska ama biyaha. Ha isku darin.
Waa inaad isku daydaa oo aad sameyso wax kasta oo aad awooddo.
Haddii aad tahay bilowga jirka jirka, ka dibna qaadashada MK-677 daawada budada ah inta u dhaxeysa 5mg ilaa 25mg maalintii waa doorasho wanaagsan adiga. Markaad sidan sameyso, waxaad ogtahay in aad arki karto natiijooyinka intaad hubinaysid inaadan wax badan ka qaadaneynin.
Haddii aad si joogto ah u isticmaasho budada MK-677, waxaa laga yaabaa in 25-50mg kuu shaqeyso bette.
Hase yeeshee, waxaad sidoo kale xitaa bedeli kartaa qiyaasta sida loo baahan yahay, tani waa hab aad u fiican si aad u hubiso in aad had iyo goor sameyso go'aamada saxda ah marka ay timaaddo shaqadaada. Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay u tagi doonaan sida hooseeya 5mg, ama xitaa heerka 50mg.Haddii aad qaadato wax ka badan intaad u baahan tahay iyo haddii aadan qaadan qiyaasta saxda ah markaas waxaad filan kartaa inaad hesho natiijada ugu fiican, tani waa mid ka mid ah waxyaabo badan oo ay tahay inaad ka fekerto goorta ay kuu imanayso si aad u bilowdo.
Faa'iidooyinka MK-677 (Ibutamoren) budada
MK-677 (Ibutamoren) budada waxay ka caawisaa dhisidda murqaha
Budada Ibutamoren waxaa badanaa loo isticmaalaa walax anabolic ah, si loo kordhiyo tirada jirka ee caatada ah, taasoo abuureysa muruqyo waaweyn. Waa hadal firfircoon oo maalinba mar la qaadi karo. Kuwani waa dhammaan faa'iidooyinka marka la barbar dhigo kicinta hormoonada koritaanka kale.
Sidii hore loo soo sheegay, budada Ibutamoren waxay kordhisaa heerarka hoormoonka koritaanka iyo IGF-1. Labada hormoon ee koritaanka iyo IGF-1 labadaba, waxay kordhiyaan muruqyada, xoojinta murqaha, waxayna yareeyaan dufanka jidhka.
In ragga daacad ah oo caafimaad qaba, daaweyn laba bilood ah oo budada Ibutamoren ah ayaa kordhay tiro caan ah, iyo si xad dhaaf ah kor ugu kacay heerka dheef-shiid kiimikaad (BMR).
MK-677 (Ibutamoren) budada ayaa yareysa murqaha
Tabaruceyaasha caafimaadka leh ee nafaqada leh, Ibib Iboramoren ayaa iska beddelay luminta protein-dhafka, taas oo keeni karta murqaha.
Bukaannada waayeelka ah ee jabta jabay, budada Ibutamoren ayaa kordhay xawaaraha socodka, xoojinta muruqa waxayna hoos u dhigtay tirada fallaadhaha.
MK-677 (Ibutamoren) budada waxay kordhisaa Cufnaanta lafta
Cunugaha Ibutamoren ee ku tabaaloobay caanaha caafimaadka leh ayaa kor u kacay wareegga lafta.
Dadka waawayn ee waayeelka ah, budada Ibutamoren ayaa kordhay dhismaha lafaha, iyada oo lagu qiyaaso osteocalcin, calaamad u ah wareega lafta.
Dumarka postpausal-ka ah, budada Ibutamoren ayaa kordhiyay cufnaanta maadada lafaha, taas oo gacan ka geysaneysa kordhinta lafta xoogga iyo ka hortagga osteoporosis.
MK-677 (Ibutamoren) budada ayaa hagaajinaysa Hurdo
Daraasad ayaa muujisay in maaddooyinka yar yar iyo waayeelka, budada Ibutamoren ay wanaajisay tayada hurdada iyo REM (dhaqdhaqaaqa isha dhaqsaha badan) waqtiga hurdada (R).
Adiga kama qaban kartid ugu fiicnaan qolka miisaanka ama qolka gudiga adiga oon hurdigaaga hurdiga u aheyn. Cudurka khatarta ah ee la yiraahdo 'Insomnia' waa hagaha ugu hooseeya ee hurdiga ah oo la daabacay dhammaan talooyinka aad u baahan tahay si aad u sarayso wakhtigaaga hurdo si aad ugu tiirsan tahay intaad kacsan tahay inta aad soo jeedo. Riix Halkan si aad u soo dejiso Hagaha Kheyraadka Insomnia oo bilaash ah si aad u bilowdo.
MK-677 (Ibutamoren) budada Combats Da'da iyo May Kordhin kara Mudnaanta
Daraasadda dadka waayeelka ah, kiniin Ibutamoren ah ayaa maalin walba kordhay heerarka GH iyo IGF-1 ee kuwa qaangaarka ah ee qaangaarka ah oo aan lahayn waxyeello halis ah. IGF-1 waxaa loo yaqaanaa in ay saameyn ku yeelato mudada dheer.
Daraasad kale, budada Ibutamoren ayaa dib u soo cusbooneysiisay astaanta hormoonka koritaanka ee maadooyinka cayilan.
MK-677 (Ibutamoren) budada ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato waxyeelada nafaqada
Dadka qaarkiis waxay isticmaalaan budada Ibutamoren sida aotropic sababtoo ah waxay ku dhaqmaysaa maqaariyaha ghrelin, taas oo leh saameyno nootropic. Waxaad ka akhrisan kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan saameyntaan ku yaal boostada ghrelin. Saynisyahanku, si kastaba ha ahaatee, weli ma baranayo haddii iyo sida budada Ibutamoren ay saameyneyso waxqabadka garashada.
Laba dariiqo aan toos ahayn oo ay budada Ibutamoren ku hagaajin karto hawlaha maskaxda:
Kiimik Ibutamoren wuxuu kordhiyaa IGF-1, taas oo loo yaqaan in lagu hagaajiyo xasuusta iyo barashada.
Budada Ibutamoren ayaa sidoo kale kordhiya muddada hurdo la'aanta REM iyo tayada hurdada. Oo waxaan ognahay in hurdada ay muhiim u tahay shaqada garashada wanaagsan.
Daraasad ayaa su'aal ka keenay ururka IGF-1 iyo cudurka Alzheimers, iyo haddii budada Ibutamoren ay noqon karto caawimaad. Si kastaba ha noqotee, daraasaddan, budada Ibutamoren waxay ahayd mid aan waxtar lahayn markii la sii wanaajiyo horumarka Alzheimer ee bani-aadamka.
MK-677 (Ibutamoren) budo waa faa'iido u leh daaweynta hormoonka koritaanka hormoonka
Budada Ibutamoren waxay kordhin kartaa hoormoonka koritaanka, IGF-1, iyo heerarka IGFBP-3 ee carruurta leh hormoon yarida koritaanka. Intaas waxaa sii dheer, saameyntan waxaa lagu gaarayaa iyada oo aan la beddelin xaddiga prolactin, glucose, triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), thyrotropin, cortisol ama insulin.
Xoogaa GH-ragga aadka u caansan, budada Ibutamoren ayaa kor u qaaday IGF-1 iyo hormoonka koritaanka, iyada oo aan wax isbeddel ah ka muuqan cortisol, PRL, iyo heerarka hoormoonka tayroodh. Si kastaba ha ahaatee, insulin iyo glucose ayaa la kordhiyay.
Budada MK-677 (Ibutamoren)
MK-677 (Ibutamoren) budada ayaa loo qaadan karaa sidii xargo oo tani waa hab aad u fiican si aad u hubiso in aad helayso dhamaan faa'iidooyinka dheeraadka ah ee aad rabto. Isagoo tixgelinaya in uu yahay korriin kobcin. waa inaad iska ilaalisid qaadashada noocyo kale oo isku mid ah haddii aad qorsheyneysid inaad isticmaasho alaabta kale. Tusaale ahaan, ha qaadan laba kobcineed oo kobcinaya awoodda ugu sarreeya iyada oo aan la tashanayo la taliyeyaasha xirfadlayaasha ah.
Dhiibitaanka: Ku dhaji 20 mg maalintii kiniiniga ah ee xajinta adkaynta diiqadda, kuna garaaca tartankaaga tartanka baaskiilka / wadada ku xiga. MK-677 (Ibutamoren) budada ayaa si fiican u shaqeyn doonta ujeedadan.
Cunto dufan: Ku dhaji cagaarka iyo kaararin si aad u hesho xayawaan saddexle ah oo dufan leh.
Faa'iido ballaaran: Ku xaji LGD 4033 iyo steroids dhiska, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan helno caddad iyadoo aan laga baqaynin inaad ku dhufato qiyaasta dufanka jirkaaga.
Caafimaadka guud: MK-677 (Ibutamoren) budada waxay siin kartaa niyad kicin, hurdo, heerarka kolestaroolka, dhaawaca bogsashada iyo xoojinta nidaamka difaaca.
MK-677 (Ibutamoren) waxyeelooyinka budada ah
Waxyeellooyinka ugu badan ee MK-677 (Ibutamoren) budada ah ayaa ah kor u kaca cuntada oo soo noqnoqda, marmarka hoose, bararka hoose ee bararka iyo murqo xanuun (R).
Inkasta oo cilmi-baarisyada badankood ay yar yahiin ama wax saameyn ah, hal daraasad ayaa la joojiyay sababtoo ah dhacdooyin halis ah. Bukaanka waayeelka ah ee jabta jabtay, budada Ibutamoren cadaadiska dhiigga, sonkorta dhiigga iyo HbA1c, waxaana jiray xaalado wadno-qabsasho wadnaha ah (R). Bukaannada ay la kulmaan wadnaha wadnaha ee qalalaasuhu waxay ka badnaayeen 80 waxayna qabeen taariikh qallafsan wadnaha.
Waxay noqon doontaa mid caqli gal ah in la daawado cunto karbohaydhidaada oo si joogto ah u eegto sonkorta dhiiga iyo insulin inta aad qaadanayso budada ibutamoren.
Sida anabolic, MK-677 (Ibutamoren) waa in laga fogaadaa haddii aad qabto kansar. Labada hormoon ee koritaanka iyo IGF-1 ayaa laga yaabaa inay kobciyaan kobaca kansarka. Ma qaadan doontid MK-677 (Ibutamoren) budo haddii aad Th1 ku badan tahay maadama hormoonka koritaanka uu leeyahay xayeysiin dhiirigelin ah.
MK-677(Ibutamoren) dulmar guud ee budada:
MK-677 (Ibutamoren) budada waa nooca daawooyinka kaa caawin kara hagaajinta dheef-shiid kiimikaad, lafo, caafimaad iyo sidoo kale maalmahaaga adduunka. Sheyga wuxuu ka shaqeeyaa kor u qaadista hormoonka muhiimka ah iyo insulin sida kobaca koritaanka 1, oo loo yaqaan IGF-1. Waxay kaloo kor u qaadeysaa koritaanka IGFBP-3.
Tababareyaasha, cayaartoyda iyo tababarayaasha xoogga waxay mar walba raadinayaan siyaabaha ka caawin kara inay hagaajiyaan waxqabadkooda iyo inay yeeshaan murqo badan. Dabcan, waxaa jira alaabooyin badan oo meesha ka baxsan oo kaa caawin kara inaad gaarto wax kasta oo aad rabto, hase yeeshee intooda badan oo ka mid ah alaabooyinkaasi waxay leeyihiin waxyeelo aanad rabin inaad ka mid noqoto. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah cadaadis dhiig oo sarreeya, xajmiga caadada, dhalmo la'aanta iyo dhibaatooyin kale oo caafimaad oo kale. Nasiib wanaag adiga, MK-677 (Ibutamoren) budada ayaa la tijaabiyey loona xaqiijiyay inuu yahay mid ku habboon jirka jirka iyo waxqabadka kale ee tababarka. Hubi inaad eegto dib-u-eegga badeecadayada caansan ee kale SARMS Ligandrol iyo Ostarin, taas oo keeneysa natiijooyin fiican.
Faa'iidooyinka iibsashada budada MK-677 / budada Ibutamoren laga bilaabo
2) Jawaab celinta suuqa iyo ka jawaab celinta alaabada waa la qadarin doonaa, la kulanka baahida macaamiisha waa masuuliyadeena.
MK-677 (Ibutamoren) budada
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee MK-677 (Ibutamoren) budada ah oo leh shaybaar madaxbannaan iyo warshad weyn oo taageero ah, dhammaan wax soo saarka waxaa lagu fulin doonaa nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo. Nidaamka sahaydu waa mid deggan, labadaba tafaariiqda iyo dalabaadka jumlada waa la aqbali karaa. Ku soo dhawow si aad u barato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan AASraw!
Tags: iibso budada Ibutamoren, Soo iibso MK-677 budada, Ibutamoren Powder, MK-677 budada
Soo iibso RAD140 (Testolone) budada: Waa maxay RAD140 loo isticmaalo? Soo iibso tufaax sare Sifooyinka GW 501516 (Cardarine) budada ah online